Warar - Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Cudurka Fida
21-kii, waxaa jiray in ka badan 180,000 oo cusub oo adduunka lagu soo kordhiyay, maalintii ugu badneyd tan iyo markii uu dillaacay.
Waqtiga 22-aad ee maxaliga ah, madaxa mashruuca caafimaadka degdega ah ee WHO Michael Ryan wuxuu sheegay in faafitaanka cudurka sambabka ee cusub ee wadamo badan oo ay ku nool yihiin dad aad u badan ay horseeday kororka kiisaska cusub ee adduunka. Qaar ka mid ah tan waxaa u sabab ah kororka tirada imtixaannada, laakiin ma aha sababta ugu weyn. Tirada isbitaalada la dhigaayo iyo kuwa dhinta ayaa sidoo kale sii kordheysa, taasi oo muujineysa in viruska uu si isdaba joog ah ugu faafayo heer caalami.
Intaas waxaa sii dheer, Ururka Caafimaadka Adduunka wuxuu sheegay in tirada kiisaska cusub ee lagu ogaadey eef-wareenka cusub ee Mareykanka ay dhawaan dib u soo laabteen ama ay sababi karto dib u bilaabid dhaqaale.
"Way cadahay in kororka awooda baaritaanka uusan si buuxda u sharixi karin kororka kiisaska. Waxaa hada jira cadeymo muujinaya in heerka isbitaal dhigistu sidoo kale uu sii kordhayo. Marka xaddidaadda karantiilku kacdo, waxay u horseedi kartaa natiijooyinka noocaas ah," WHO Qorsheynta Degdegga ah ee Caafimaadka Agaasimaha Fulinta Michael Ryan ayaa warbaahinta u sheegay. Ryan wuxuu sheegay in markii la arkay warbixinta ay farta ku fiiqday kororka tirada dhalinyarada ee kiiska. "Waa macquul in dhaqdhaqaaqa dhalinyarada ee sare aawadiis, inay ka faa'iideysanayaan xayiraadaha si ay u bilaabaan inay baxaan." Ryan wuxuu tilmaamay in WHO ay si isdaba joog ah u xasuusisay markii Markii la joojiyay amarkii karantiil ahaanta, "kiisaska kordhay" ay ka soo muuqdeen meelo badan oo adduunka ah. Agaasimaha guud ee WHO Tan Desai ayaa ka sheegay shirka jaraa'id in 21-ka, ay jiraan in ka badan 183,000 oo kiisas cusub oo laga helay adduunka oo dhan, oo ah kii ugu badnaa tan iyo markii uu dillaacay.